Kuderedzwa panzvimbo peminda yeminda. Pepanhau rakakura kwazvo muMorocco nhasi rinotaura nezvechisarudzo chedu kuParamende yeAustralia kukumbira Mambo weMoroccan kuti vatipe ndege yeHercules-C130 landmine kuitira kuti tishandure kuti iitezve sango reMorocco & Australia. Fekitori diki pano kwedu kweMoroccan nzvimbo inofanirwa kuburitsa madhiri emuti ayo anobva araswa. Pasina rubatsiro rweMambo weMorocco, hapana chatingaite. Sezvo asina kupindura kune edu ekupedzisira mavara, isu hatisi kufungidzira chero mikana, asi isu tinofara nezve zvakanaka zvinoshamisa.
Tagged: kuderedza zvombo, mugwenzi moto, moto, hercules, landmines, zvangu, kuchengetedza, upcycling